ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ Myanmar Egress အဖွဲ့မှသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ လာရောက်လေ့လာ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယား နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲကြေညာခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pier Giorgio Aliberti အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်လွှာ
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၈/ ၂၀၁၅)
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၉၀/ ၂၀၁၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၉/ ၂၀၁၅)
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၇/ ၂၀၁၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၆/ ၂၀၁၅)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchell နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆ
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၅/ ၂၀၁၅)
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၄/ ၂၀၁၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၃/ ၂၀၁၅)
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၁/ ၂၀၁၅)
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၀/ ၂၀၁၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၉/ ၂၀၁၅)
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၈/ ၂၀၁၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၇/ ၂၀၁၅)
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၆/ ၂၀၁၅)
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၅/ ၂၀၁၅)
တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၄/ ၂၀၁၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၃/ ၂၀၁၅)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်း မဲရုံများအား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေး
မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက်
ဆန္ဒပြုပြီးသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအား လဲလှယ်ခွင့်မရှိကြောင်း ကြေညာချက်
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာခြင်း မီဒီယာစင်တာများ ဖွင့်လှစ်မည်
မဲရုံအတွင်း ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုရိုက်ခွင့်မပြုရေး
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်းနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အခြားမိတ်ဆွေ နိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စုဝေးဟောပြောခြင်းနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းတို့ကို ရပ်နားထားရမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းချုပ်
ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေး အန္တရာယ် များ စီမံ ခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယ မြောက်နေ့ ဆက်လက် ကျင်းပ
ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ စီမံ ခန့် ခွဲမှု နည်းစနစ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ Myanmar Egress အဖွဲ့မှ သင်တန်းသား များ လာရောက် လေ့လာ
အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာ အတွင်းသို့ အချက် အလက် ဖြည့်သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက် မှုများ စတင်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗွီဂျေ နမ်ဘီးယား နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Christoph Burgener နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းအား ကွန်ပျူတာ အချက် အလက် ထည့်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဗြိတိန် နိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့၊ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ အကြီးတန်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်Sir Robert Francis Cooper နှင့်တွေ့ဆုံ
Meeting With CSO 6
Meeting With CSO 5
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၂၉.၃.၂၀၁၃)
Meeting With CSO 3
Meeting With CSO 2
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာ Egress မှ ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၇.၆.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၅)ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံ၍ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား အငြင်းပွား ဆန္ဒပြမှုများ၊ နိုင်ငံတော်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လျှပ်စစ်မီးပြတ် တောက်မှုကြောင့် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး(၂၉.၅.၂၀၁၂)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ (၁၀)ပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၂၇.၇.၂၀၁၂)
Meeting With Political Parties 3
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၅၂)ပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၃.၁.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၈.၄.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ International Foundation for Electoral System(IFES) မှ President Mr. Bill Sweeney ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၁.၁၀.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ The Carter Center မှ Field Office Director ဖြစ်သူ Mr.Frederick Rawski အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၄-၁၂-၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၇ - ၁ - ၂၀၁၄)
Meeting with foreigners 5
Meeting with foreigners 4
Meeting with foreigners 3
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဥရောပသမဂ္ဂမှ နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးရာ အကြီးအကဲ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ရောဘတ်ကူးပါး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၄.၉.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာဦးဆောင်သည့် The Elders အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၂၅.၉.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့်တွေ့ဆုံ (၁၀.၁.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နေပြည်တော်ခရိုင်၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့်တွေ့ဆုံ (၁၇.၂.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နေပြည်တော်ခရိုင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရှိ မဲရုံများအား လိုက်လံစစ်ဆေးခြင်း (၃၁.၃.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ (၇.၃.၂၀၁၃)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးအား အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း Mr. Jimmy Carter လာရောက်တွေ့ဆုံ
The Carter Center မှ Field Office Director Mr.Frederick Rawski နှင့်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop)
National Democratic Institute ၏ Resource Person အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Dr. Neil Nevitte အား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ The Innovative အဖွဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ လာရောက်လေ့လာ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီး လာရောက် တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု အစည်း အဝေးကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဝါဆို သင်္ကန်း ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များနှင့် ကဏ္ဍစုံမှ သက်ဆိုင် ပတ်သက် သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop) (3)
လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပပေးမည်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပပေးမည်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် The Carter Center မှ Field Office Director Mr.Frederick Rawski တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းစနစ် ( ERM Tool ) ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖောင်ဒေးရှင်း ( IFES) တို့အကြား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် အသိပညာပေးဖလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီအား ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ အမည်သို့ ပြောင်းလဲ ခွင့်ပြုခြင်း
တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၆ ) ဦး အစားထိုး ပြောင်းလဲခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၏ ပြန်တမ်းဝင် အမှတ် ပြင်ဆင်ခြင်း
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးနှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ နှင့် ကဏ္ဍစုံမှ သက်ဆိုင် ပက်သက်သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးUNDP အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများ နှင့်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ တာ၀န်ရှိ သူများနှင့် တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် ၂၀၁၄ မှ ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာ များအပေါ် ဗဟိုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် သံရုံးမှ ပထမ အတွင်းဝန် နှင့် USAID လက်အောက်ရှိ The Office of Democracy & Governance မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့်အဖွဲ့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် Strategi Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေ
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Strategi Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေ